Soomaaliland oo diiwaangelin ka bilowday meel u dhow garoonka Kanooko ee gobolka Nugaal. – Radio Daljir
Soomaaliland oo diiwaangelin ka bilowday meel u dhow garoonka Kanooko ee gobolka Nugaal.
Agoosto 29, 2016 2:36 b 0
Kacaya, Aug 2016–War deg deg ah oo hadda naga soo gaarey deegaanka lagu magacaabo Tuur-kacaya ee gobolka Nugaal ee dhanka xuduudka gobolka Sool Garoowe-na ujirta 78 KM lageeyey sanaadiiqda diiwaangelinta Soomaaliland.
Mid kamid ah dadka deegaanka oo lahadlay warbaahinta qaar ayaa sheegay in deegaankaasi lakeenay sanaadiiqda doorashada Soomaaliland oo ay wadaan gaadiid dagaal iyo mas’uuliyiin maamulkaasi katirsan.
Goob joogahaani ayaa waxaa uu sheegay in dadka reer guuraga u badan ee kunool halkaasi ay ku yaaceen goobta sanaadiiqda diiwaangelinta legeeyey si ay dhaqaale uga helaan.
Soomaaliland ayaa lagu soo waramayaa inay dhaqaale siinayso dadka deegaanka si ay uga qaybgalkaan diiwaangelinta ay kawado deegaanka Kacaya oo ah dhulbeereed iyo daaqsin siweyn loodegan yahay.
DHEGEYSO-Soomaaliland oo dhaqdhaaqyo iyo diiwaangeli ka bilowdaya dooxada Kacaya.
DHEGEYSO-Gudoomiyaha Bangiga dhexe oo barlamaanka looga yeeray.